﻿ ११ नं. वडाको योजना : ‘पाँच वर्षभित्र सबै बाटो कालोपत्रे’
अहिले ११ नं. वडा भरी हरेक किसिमका योजनाहरु कामहरु सुरुवाती अवस्थामा छन् । अहिले योजनाको उपभोक्ता समितिहरु गठन गर्दै अहिले अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । अझै एउटा उपभोक्ता समिति गठन गर्न बाँकीनै छ । गर्नुपर्ने कामहरु त धेरै नै छन् । हामी अहिले सुरुवाती अवस्थामा नै छौँ ।
पहिलेकोभन्दा धेरै प्रगति भएको छ । बाटोघाटो को अवस्थालाई हेर्नुहोस । जहाँ बाटो साँघुरो थियो । फराकिलो गर्दै पनि लगिरहेका छौँ । जहाँ पिच गर्नुपर्ने छन त्यहाँ पनि अहिले पिच गर्ने कार्यहरु पनि अगाडी बढदै नै छ ।
वडाको विकासको विषयमा कुन कुरालाई तपाईले पहिलो प्राथमिकता दिनु भएको छ ?
सर्वप्रथम हाम्रो ११ नं. वडा अलि विकट र बाटोघाटोको समस्या भएकोले गर्दा बढी हामी पुर्वाधारको क्षेत्रमा फोकस गरिरहेका छौँ । त्यसपछि जनचेतना विकासको कार्यक्रममा हामी लागेका छौँ । महिला साक्षरता अभियानमा हामी जुटेका छौँ ।
अहिले वडाका समस्याहरु धेरै छन् । सर्वप्रथम बाटोघाटो नै हो । बाटो घाटोलाई नै हामीले एकदमै समस्याको रुपमा हेरेका छौँ । र हामीले बाटोघाटो मै बढी फोकस गरेका छौँ । शिक्षाको सन्दर्भमा यहाँ शिक्षाको पनि समस्याहरु निकै छन् । अहिले हाम्रो वडामा एउटा मात्रै प्रा.वि. स्तरको सरकारी स्कुल छ । त्यसलाई अहिले अधारभूतमा परिणत गरिएको छ ।
तपाईहरुको वडामा स्वास्थ्यको अवस्था कस्तो छ ?
स्वास्थ्यमा पनि अलि पिछडिएको नै छ । हाम्रो ११ नं. वडावासीहरु स्वास्थ्यको जाँच गर्नको लागि खनारकै हेल्थपोष्ट जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । साह्रो बिरामि भएको बेला कि विराटनगर कि त इटहरी नै धाउनु पर्ने अवस्था आउँछ ।
कर्मचारीहरुले राम्रै सहयोग गरिराखेका छन् । अहिलेसम्म नराम्रो भेट्या पनि छैन । र मैले पनि आफ्नो हिसाबले कर्मचारीहरुलाई निर्देशन पनि दिइसकेको छु । जतिसक्दो जनताको काम छिटो छरितो र प्रक्रियागत ढंगले गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिइसकेको छु ।
चुनावको बेला तपाईले के कुराको प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो र तिमध्ये अहिले के के कुरा पुरा भए ?
चुनावमा जनता समक्ष घर घरमा जाँदा मैले उहाँहरुसँग वाचा राखेको थिएँ, सर्वप्रथम हाम्रो समस्या भनेको बाटोघाटोलाई नै बढी प्राथमिकता दिने भन्ने हो । जहाँ ग्राभेलपनि छैन, त्यहाँ ग्राभेलिङ गर्ने, जहाँ साँघुरो बाटो छ, त्यसलाई फराकिलो बनाउने, पिच गर्नु पर्ने छ भने पिच गर्ने । त्यो अनुसारले पनि हामीले बजेट छुट्याएका पनि छौँ । र अर्को कुरा के छ भने उहाँहरुको काम जतिसक्दो वडा कार्यालयमै अइसकेपछि छिटो छरितो ढंगले गर्ने वाचा गरेका थियौँ ।
त्यसलाई पुरा पनि गर्दैै हुनुहुन्छ त ?
राम्रै तरिकाले गरिरहेका छौँ । प्रक्रियागत ढंगले राम्रै तरिकाले उहाँहरुको काम पुरा गरिरहेका छौँ ।
वडाको विकासको विषयलाई लिएर कोसँग के आग्रह र माग राख्नु भएको छ ?
वडाको विकासको विषयलाई लिएर हर स्थानीय हर क्षेत्रतिर उत्तिकै घच्घचाइ रहेको छु । सर्वप्रथम त सम्बन्धित निकाय नगरपालिका नै हो । त्यसैले वडाको विकासको लागि इटहरी उप–महानगरपालिका बाट केही गर्नुपर्छ । बाटोघाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाढी नियन्त्रणका लागि तटबन्धका कुराहरु, खेलकुद आदि । मैले बाहिरी संस्थाहरुलाई पनि यहाँ विकास गर्ने सवालमा घच्घचाइ रहेको छु । जस्तै सुनसरी–मोरङ जोड्ने नहरको बाटो बनाउन लागि परेको छु ।
वडाको विकासको लागि सर्वप्रथम बजेट नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो । जति बजेट छ त्यति नै विकास हुन्छ । बजेट नभइकन विकास हुँदैन ।
अन्त्यमा म आफ्नो ११ नम्बरको सम्पूर्ण जनताहरुलाई म यहि भन्न चाहन्छु म जनप्रतिनिधि भएर आएको पाँच वर्ष भित्रमा म यहाँहरुको घर अगाडीको बाटो पिच गर्ने योजनामा लागिपरेको छु ।